musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Russian Sputnik yekudzivirira mushonga wechiitiko chekushanya kwePhuket
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Health News • Hospitality Industry • nhau • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Mushonga weRussia Sputnik
Phuket yave yemakore yave nzvimbo inozivikanwa kwazvo nevashanyi veRussia, ichitarisa mu2019 nevanopfuura mazana manomwe ezviuru vanosvika munguva pfupi yemwedzi mishanu mu700,000, vese vachisvika nendege dzakananga kubva kuRussia Federation. Mamiriyoni e5 maRussia vakashanyira Phuket mu2019.
Thai's Center yeCOVID-19 Situation Administration (CCSA) ichangobvumidza mushonga weRussia Sputnik.
Musika weRussia unobuda ndiwo mukuru pasi rose kunze kweChina.
Sezvo maRussia vanogadzirira kushinga mwaka wekudonha uye mwaka wechando, kubvumidzwa kwechirwere cheSputnik inguva yakakwana yemwaka wepamusoro kutanga munaNovember gore rino.
Nguva yechinyakare yechando kubva munaNovember kusvika Kurume ndipo panodzikira tembiricha muRussia uye zvakare munzvimbo zhinji dzekuchamhembe kweEurope, zvichiratidza vafambi kuti vatize kutiza kune dzinopisa chime uye nekujeka matenga ebhuruu ePhuket.
Nhasi, vabatiri vezvekushanya muPhuket, Thailand, vari kuzivisa kubvumidzwa kwakakosha kwechirwere cheSputnik neThailand's Center yeCOVID-19 Situation Administration (CCSA) iyo yakagadzirirwa kuburitsa musika weRussia kuchamhembe kweThai chitsuwa.
“Idzi inhau dzakanaka dzePhuket. Yasvika nguva yekudarika Sandbox uye kuvaka hwaro hwehurongwa hwekushanya, ”akadaro Mutungamiri wePhuket Tourist Association, Bhummikitti Ruktaengam. “Maindasitiri ava anogona kudzokera kuzvinhu zvekutanga otarisa mumwaka wechando wekuEurope. Uyu mukana wakakura wePhuket. Iyi ndiyo misika yedu yenhaka. ”
Laguna Phuket, nzvimbo yakabatanidzwa munzvimbo inozivikanwa yeBangtao Beach, ine mahotera manomwe; Chipatara cheBangkok chakashanda PCR bvunzo-nzvimbo; uye maeka enzvimbo dzakashama, mapindu nemadhibhoni, anga atove mubatsiri we iyo Phuket Sandbox yakapihwa mukurumbira wayo wakachengeteka, asi iri idanho rakakura kumusoro zvinoenderana neManaging Director, Ravi Chandran.
"The kugamuchirwa kwemushonga weSputnik anochinja mutambo wePhuket, ”akadaro. “Musika weRussia uri kubuda ndiwo mukuru pasi rose kunze kweChina uye nguva yacho yakakwana nemwaka wepamusoro unotanga muna Mbudzi gore rino. Phuket Sandbox yakaratidza kuva yakabudirira uye izvi zvino zvichaendesa izvi zvibodzwa kunzvimbo dzakakwirira kumahotera ese, vane chekuita nekushanya, uye munharaunda munharaunda yechitsuwa ichi. "
Kubva munaChikunguru 1, anopfuura 300,000 emakamuri emahotera akaunganidzwa kusvika kupera kwaNyamavhuvhu nevashanyi vekunze vanosvika vachishandisa chirongwa chePhuket Sandbox, nhamba inotarisirwa kukwira nekukurumidza mwaka mukuru uchiswedera. Yakarongwa uye yakarongedzwa vatakuri veRussia vanotarisirwa kusvika muPhuket kubva muna Gumiguru 2021.
Vachitaura nezve "yakagadzirira-kugadzirwa" musika kugona, C9 Hotelworks Managing Director, Bill Barnett, akati "Tichiuya mu2021 yechando yechando uye nekuchinja musika, maRussia, avo vanowanzove ne11-12-husiku hwevhareji urefu hwekugara, vakakwana inokodzera Sandbox. ”